Ntuziaka maka ndị ahịa - B2B Market Market - Ozi Ndị Zụrụ - Alietc.com
Maka ahụmahụ ka mma ka gbanwee ihe nchọgharị gị na CHROME, FIREFOX, OPERA ma ọ bụ Internet Explorer.
Ulo ahia B2B
B2B Akụkọ & Akụkọ
N'ebe a na Alietc, anyị kpebisiri ike ịmepụta ebe ahịa dijitalụ zuru ụwa ọnụ na-ejikọta ọnụ emepụta, ndị na-eweta ọrụ na ndị na-ere ahịa, na-enyere aka igosipụta ihe bara uru na ogologo oge, mmekọrịta azụmahịa na-adịgide adịgide.
Igodo nke ihe ịga nke ọma dịka onye na-azụ ahịa nwere ike ịdabere n'ọtụtụ ihe ndị mmadụ n'otu n'otu, yabụ iji bulie ohere gị nke inwe ihe ịga nke ọma na Alietc, anyị achịkọtara Ntuziaka Onye Ọzụma a bara uru iji nyere gị aka izere ọtụtụ mmejọ ndị nkịtị na-eme mgbe ị na-achọ ịzụta ngwaahịa.
Isi ihe maka imebe ezigbo aha ya na ndi na-ebuputa ya na ndi n’enye ha ego bu ikwuputa ngwa ngwa
Ndị ọzọ ị na-eji Alietc, ị ga-amata na aha ọma gị ga-aba nnukwu uru, ọ ga - enyere gị aka imechi azụmahịa ngwa ngwa. Otu ihe kachasị dị mkpa gbasara aha gị dị ka onye na-azụ ahịa bụ ka esi dozie akaụntụ gị na onye na-ebunye ya ma ọ bụ onye nrụpụta ya. O nwere ike bụrụ na ikwenyela ịkwụ ụgwọ 50% n'ihu na 50% na nnyefe. O nwere ike bụrụ na gị na onye na-ebubata ya ihe ma ọ bụ onye nrụpụtara ekwenyeala ka ị dozie ego n'ime ụbọchị iri atọ ị nwetara ngwa ahịa.
Okwu ọ bụla ị kwenyere maka ịkwụ ụgwọ, rapara na ha ma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite mmekọrịta ogologo oge ndị na-eweta ọrụ na emepụta, kwụọ ụgwọ ngwa ngwa karịa ka ha tụrụ anya ịkwụ ụgwọ.
Iwulite ntụkwasị obi
Otu isiokwu ị na-ahụkarị mgbe ị na-eji Alietc ikpo okwu bụ na anyị na-etinye oke aka na ntụkwasị obi. Ntụkwasị obi, n’achụ ahịa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa dịịrị ya, ma nwee aha ọma dịka onye azụpụtara ntụkwasị obi, ike ịzụta gị ga-abawanye nke ukwuu. Dịka ọmụmaatụ, onye nrụpụta nwere ike na-akpọ onyinye maka ngwaahịa ha na-ere, ngwaahịa ahụ ga-amasịkwa gị. Cheedị ma ọ bụrụ na onye nrụpụta nwere onyinye atọ, abụọ sitere n’aka ndị zụrụ ihe na-enweghị aha, yana onyinye gị, nke dị ntakịrị karịa, mana ha maara na ọ bụrụ na ha na-emeso gị, na ha ga-enweta ụgwọ n’enweghị nsogbu ọ bụla, Ohere inweta bụ na n’oge nke gị. kachasị enye onyinye, ọ bụ nke a nabatara n'ihi na a na-ahụ gị dịka onye ahịa tụkwasịrị obi.
Communicationkparịta ụka dị ezigbo mkpa
Site na mmalite nke azụmaahịa ọ bụla, nkwukọrịta dị mma, nke doro anya ma na-ahụkarị mgbe niile dị ezigbo mkpa. Atụla egwu ịjụ onye na-ebubata ya ma ọ bụ onye nrụpụta ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa (ha) ha na-ere, tinyere oge nnyefe, wdg. Ọ bụ akaha mkpesa banyere ihe ozugbo enyere aka.
N’ezie, ikwukọrịta ekwesighi ịkwụsị ozugbo ịmechara ihe gị n’ibu ma ngwongwo rute ma bụrụkwa afọ ojuju gị. Mee ka onye na-ebubata ya ma ọ bụ onye nrụpụta mara na ị nwere obi ụtọ n'ihe niile yana na ị nwere olile anya ịme azụmaahịa ọzọ n'ọdịnihu dị nso. Akụkụ nke ihe ịga nke ọma nke Alietc dabere na ọnụọgụ nke mmekọrịta dị mma, na-adịte aka dị n'etiti ndị na-azụ ahịa, ndị na-ebubata ya na ndị na-emepụta ya.
N'ebe a na Alietc anyị ghọtara nke ọma na dịka anyị bụ ụwa zuru ụwa ọnụ n'ọma ahịa, ob ugh i mmad u niile ga-asụ otu as us u. Maka inwe ezi nkwukọrịta dị ezigbo mkpa, anyị edekọtara aha ndị ntụgharị ga-enyere gị aka n’ozi gị.
Ingkpọtụrụ ndị na-eweta ngwaahịa na ndị nrụpụta
Ebe ọ bụ na ndị na-azụ ahịa agaghị abụ ndị otu iji zụta ngwaahịa na Alietc, anyị kpebiri na ụzọ kachasị mma iji malite mkparịta ụka bụ ibute anyị site na mbụ. Ma ahia diri ire ahia a ka obula ire ahia ma obu onye n’ere ahia ma obu onye n’ere ahia a n’eleta onyinye, ihe mbu i g’eme kporo mmadu kwesiri ibu. Alietc.
Nke a bụ ka anyị nwee ike zere 'ndị spammers' na igbochi ajụjụ ndị na-abụghị ezigbo ya. Ozugbo anyị juputara na nyocha gị bụ ezigbo, anyị ga-enye gị nkọwa kọntaktị onye na-ere ma ọ bụ nke onye nrụpụta ma ị nwere ike ime ha ozugbo, ịkwesighi ịgụnye. Alietc ọ bụla.
Can nwere ike iji igwe nchọta anyị dị ike ịchọta ndị na-emepụta ma ọ bụ ndị na-eweta ngwaahịa (s) nke ị na-achọ ma kpọtụrụ ndị na - enye ndị ahịa n'efu.
Can nwere ike idobe ọnụ ahịa na ngwaahịa ọ bụla edepụtara maka ọrịre na Alietc ikpo okwu. Maka ngwọta a ịkwesịrị ịdebanye aha na atụmatụ ọ bụla.
N’ikpeazụ, ịnwere ike itinye arịrịọ ngwaahịa, nke ị na-eme ka o doo anya ihe ngwaahịa (s) ị na-achọ ịzụta na ihe ị dị njikere ịkwụ ụgwọ maka ya (ha) - ndị na-eweta ngwaahịa / ndị nrụpụta ọ bụla nwere ike ịnye ngwaahịa (ha) ị na-achọ ga-enweta ọkwa ozugbo nke arịrịọ ngwaahịa gị, mgbe ahụ ị ga-akpọtụrụ ya ma ọ bụrụ na ọnụahịa ị na-achọ ịkwụ ụgwọ nwere mmasị na ha.
Ọ bụrụ n’ị na-achọ ịzụta ngwaahịa, mgbe ahụ ị abịala ebe kwesịrị ekwesị. Alietc bụ “Aladdin's Cave” nke a na-akọkarị maka ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ akụrụngwa ị nwere ike iche, ọtụtụ ndị ị nwere ike ịmaghịdị adị.
Dịka ebe azụmaahịa B2B dijitalụ, e mere Alietc n’uche ebumnuche ịmebata ndị zụrụ ya n’ahịa na ndị na-emepụta ngwaahịa na ọnụ ahịa mara mma ma na-ejikwa ụkpụrụ dị elu. Ihe ị ga - achọpụta bụ na, dabere n’ihe ị na - achọ ịzụ, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ndị na - ere, ma ọ bụ ndị nrụpụta ma ọ bụ ndị na - ebubata ya, nke a pụtara na ha ga - achọ inye gị ngwaahịa na ọnụahịa iji dabaa gị iji bido. ihe ga-atụ anya ga-abụ ezigbo mmekọrịta na-adịte aka.
Site na iji ihe omume SEO ezubere iche, anyị emepụtala ahịa ahịa dijitalụ B2B na-enweghị ngwaahịa maka ire ere ọnụahịa akọwapụtara dịka ị nwere ike ịhụ na nyiwe dị ka eBay ma ọ bụ AliBaba, mana ọ na-agbakwa mkparịta ụka dị n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere, ha abuo ndi otu ndi Alietc, nke putara na ha abua choro ka ha me ahia.
Ihe dị mkpa ka ị ghọta bụ na ị nwere njikwa zuru oke etu esi azụta ngwaahịa, kedu nke a ga-ekpughe n'okpuru.
Ihe ichoro ime
Ozugbo ị debanyere aha na Alietc, ị ga - enwe ike ịmepụta profaịlụ gị.
Biko were obere oge iji mepụta profaịlụ nke na-ahụ maka anya ga-amasị ndị ahịa - anyị ekepụtala Akwụkwọ Ndụmọdụ bara uru na Creatmepụta profaịlụ Alietc nke naanị ndị otu nọ. Na ntuziaka ndị ọzọ bara uru nke ukwuu, njikwa ihe okike gị ga - enyere gị aka ịzọdo ụkwụ wee mee ka ị ghara imebi oge na-adịghị mkpa.
Ikpeazụ, ịnwere ike ịbanye na nke otu anyị atụmatụ otu, ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ọnụ ma ọ bụ tinye arịrịọ ịzụta ngwaahịa.
Ozugbo ị debanyere aha Alietc, ị nweere onwe gị ịmalite ọchụchọ na isi mmalite nke ngwaahịa ịzụta.
Enwere ike ịme otu n'ime ụzọ atọ a:
Chọọ na kọntaktị ndị na-eweta ya. Can nwere ike iji igwe nchọta anyị dị ike ịchọta ndị na-emepụta ma ọ bụ ndị na-eweta ngwaahịa (s) nke ị na-achọ ma kpọtụrụ ndị na - enye ndị ahịa n'efu.
Mee oghere. Can nwere ike itinye bidị na ngwaahịa ọ bụla edepụtara maka ọrịre na ikpo okwu Alietc. Maka edozi a ịkwesịrị ịdebanye aha na atụmatụ ọ bụla.
Arịrịọ ịzụta ngwaahịa. Can nwere ike itinye arịrịọ ngwaahịa, nke ị na-eme ka o doo anya ihe ngwaahịa (s) ị na-achọ ịzụta na ihe ị dị njikere ịkwụ ụgwọ maka ya (ha) - ndị na-eweta ngwaahịa / ndị nrụpụta ọ bụla nwere ike ịnye ngwaahịa (ngwaahịa) gị na-achọ ga-enweta amamịghe ozugbo nke arịrịọ ngwaahịa gị wee mechaa kpọtụrụ ma ọ bụrụ na ọnụahịa ị na-achọ ịkwụ ụgwọ nwere mmasị na ha. Maka edozi a ịkwesịrị ịdebanye aha na atụmatụ ọ bụla.
Ọ bụrụ n ’ị ka nwere ajụjụ ọ bụla
Maka na ịgabeghị mbụ Alietc, ị nwere ike nwee ụfọdụ ajụjụ ndị ọzọ ịchọrọ ịza. N'agbanyeghị ajụjụ ị chọrọ zara, anyị nọ ebe a iji nyere gị aka, yabụ, naanị kpọtụrụ anyị ga-azaghachi ya ozugbo.
Biko rụba ama: Iji hụ na onye ọ bụla nke na-eji ahịa ahịa Alietc na-eme nke ọma na mmụọ nke mpaghara a na-arụ ọrụ, dabere na ọkwa otu ị nwere, ị ga-akwụrịrị obere ndepụta ma ọ bụ ego ọnụahịa gị. Ebumnuche anyị bụ iwepụ 'spam' na ndị ọrụ na-adịghị njọ n'elu ikpo okwu, nke a abụrụla ụzọ kachasị dị irè. A kọwara nke a nke ọma na ngalaba Ndị otu.
Alietc - Ego riri nne karịa ebe ahịa B2B dị
Ngwaahịa Ahịa - Mkpụrụ, Mkpụrụ wdg
Nri & Beverages Ngwaahịa & Site Ngwaahịa
Ntinye Ugbo - Fatịlaịza, Pesticides & Seeds
Agri & Ngwa igwe na igwe nri
Azụ na Ngwaahịa
Ugbo ahihia - Ifuru, Osisi & Ngwaahịa ndị metụtara ya
Anụ ụlọ, anụ ọkụkọ, anụ & ngwaahịa anụmanụ
Ngwaahịa & Akpụkpọ anụ Ngwaahịa
Oge Anya Mara Anya Anya
Ugbo ala & Ngwa
Onye na-ere ahịa na-ere ahịa
Onyinye & Crafts
Ahụike & Ahụike
Akpa akpa na akpa
Nkwakọ ngwaahịa & Mbipụta
Rubber & Plastik
Nchedo & Nchedo
Akpụkpọ ụkwụ & Ngwa
Ihe egwuregwu & ntụrụndụ
Constructionlọ & Reallọ
Mmanụ & Metallurgy
Mmanya na-egbu egbu, ụtaba na ngwaahịa ndị yiri ya
Ngwa mmanya na ngwaahịa ndị metụtara ya
Copyright 2020 © Alietc.com B2B Marketplace, Ikike niile echekwabara. T&C - PP
Chefuru okwuntughe gị ?
Debe Akaụntụ m